संविधानवि.द्हरुसँग परामर्श गर्दै वामदेव, मन्त्री ब.न्लान त ?
काठमाडौं असोज । स´त्तारूढ नेपाल कम्यु´निष्ट पार्टी (ने´कपा) का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानवि´दहरुसँग आज परामर्श गर्न लागेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य बनेलगत्तै नेता गौतम मन्त्री बन्ने च´र्चा चलिहरेको छ । तर, गौतम मन्त्री बन्नको लागि संविधान बा´धक भएको छ । आजमात्रै गौतमलाई मन्त्री नबनाउन भनी सर्वोच्च अ´दालतमा रि´ट द´र्ता भएको छ । आज वरिष्ठ अधिव´क्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रि´ट द´र्ता गराएका हुन् ।
आफूलाई मन्त्री नबनाउन भनेर सर्वोच्च अ´दालतमा रि´ट परेपछि गौतमले आज साँझ ८ बजे संविधानवि´दहरुसँग छलफल गर्ने भएका हुन । छलफलमा टिकाराम भट्टराई, डा. युवराज संग्रौलालगायतका अधिवक्ताहरु सहभागी हुने जनाईएको छ । संविधानको धारा उल्लेख गर्दै गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु तथा सांसदको रुपमा कार्य समेत नगराउनु भनिएको छ । यसको सुनुवाई मिति ७ असोजका लागि तो´किएको त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
‘बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउनु’ भन्दै सर्वोच्चमा रि´ट
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा त´त्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको नि´र्वाचनमा प´राजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ ब´मोजिम मन्त्री प´दमा नि´युक्तिका लागि यो´ग्य हुने छैन भनेको छ । यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ ।